भिमजी,बिखण्डन कस्ले निम्त्यायो भन्दै आयो भिम रावललाई आबुधाबी युएईबाट खुल्ला पत्र ! – Sanghiya Online
Posted on : September 2, 2019 - No Comment
भिम रावल ज्यू नमस्कार!
भदौ १२ गते,अनलाईन खबरमा बाबुरामले बिखण्डन निम्ताउन खोजे शिर्षकमा तपाईको भनाईभन्दै, प्रकाशित समाचार प्रती मेरो केही जिज्ञासा रहेकोले, तपाईसङ्ग केहि सवालको निम्ति प्रष्तुत हुदैछु।
भिम जी,बिखण्डन कस्ले निम्ताउन खोज्यो? तपाईं र तपाईको विचारले कि, डा.भट्टराई र उहाँको विचारले ..? के विभेद, उत्पीडन एवं अन्यायमा परेकालाई साथदिन्छु भन्दा, बिखन्डन निम्ताएको अर्थात विखण्डनलाई साथ दिएको हुन्छ…? के विखन्डन ननिम्ताउन थारुहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूमी र त्याग्नुपर्ने? थारुहरुले आफ्नो भाषा,धर्म संस्कृतिलाई डडाइदिन पर्यो? अनि उनिहरुको पूर्ख्यौली जमिन तपाईहरुलाई लुटन दिएर त्यही आफ्नैभूमी,आफ्नै सम्पत्तिमा सधै, तपाईहरुको स्याहार सुसार गर्न थारुहरु कमैया कमलरी बसिदिनु पर्यो? थारुहरुवाट तपाईंहरुले हड्पेका आफ्नै जग्गा जमिन खन्न र जोत्न, पुस्तौंपुस्तौंसम्म तपाईहरुका हलि,गोठला,हरुवा चरुवा बसीदिनु पर्यो? यसोगर्योभने सुदुर पश्चिमी सनातनी तपाई शासक जमिन्दार र तपाईहरुको नश्ल नातागोतासङ्ग सामाजिक सद्भाव कायम रहि रहन्छ हो? यहि हो तपाईंको माक्सवादी विद्वता..? यहि हो तपाईको नेकपाको पार्टी राजनिती होइन..? अचम्मलाग्छ कस्तो किसिमको हास्यास्पद विचार हो तपाईको..?
तपाई, शेर बहादुर देउवा,लेखराज भट्ट र संगै जोडिएका जिल्ला बर्दियाका तपाइकै पार्टीका शिर्षनेता बामदेव गौतमहरुले, पुस्तौं-पुस्तौंसम्म यहि निरन्तरताको निम्ति त माननीय रेशम चौधरी लगायत दर्जनौ निर्दोष थारुहरुलाई जेलमा राखिरहनु भएको छ। सयौं थारुहरुलाई बिल्लिबाठ गराउनु भयो। थुप्रै थारु चेलीहरु बलात्कार गर्नुभयो। थारुहरुको थुप्रै सम्पत्ति लुट्नुभयो। थुप्रै सम्पतिमा आगो लगाएर खरानी बनाइदिनुभयो। यो हामिले तपाईलाई लगाएको अतिरन्जित आरोप होइन। तपाईहरुद्वारा नै निर्मित, तर तपाईहरुले सार्वजनिक गर्न पट्क्कै नमानेको गिरिषचन्द्र लाल आयोगको हालै मिडियामा आएको प्रतिवेदनको आसयले यहिभन्छ।
अर्थात यसलाई यसरी बुझौ थारुहरुलाई दास,नोकर,कम्लहरी कमैया राख्ने सवाललाई कुनैन कुनै रुपमा तपाईहरु निरंतरता दिन चाहनुहुन्छ। काठमाडौं लगाएतका ठुला शहरका धनिमानिको घरमा थारु चेली बेटीहरुलाई कम्लहरीको निम्ति ठेगेदारी र दलालीको निम्ति कम्पनी निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ।
अखण्डताको नाममा आफुलाई कथित राष्ट्रवादी बनाएर आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान र सामाजिकन्यायको अधिकार खोज्ने र यी मुद्दालाई साथ समर्थन दिनेहरुलाई बिखण्डनकारी देख्ने तपाईका घोर नश्लवादी एवं बाहुनवादी षड्यन्त्रको माकुरेजालो अब च्यातिसकेको छ, यति बुझ्नुहोस् तपाईहरु नाङ्गीसक्नुभएको छ।
भिम जी, यदाकदा तपाईलाई पनि कतिथ राष्ट्रवादीनेताको उपमा दिएको देख्छु। राष्ट्रवादी बन्न त पहिला राष्ट्र रहनुपर्ला नि होइन? यदी राष्ट्र नै नभए केको राष्ट्रवादी बन्नु..? अरेसाथी,वष्तुत: जातिय पहिचान भनेको पनि राष्ट्र नै हो। अर्थात कुनै जाती वा ठाउँको सामाजिक,भौतिक,अध्यात्मिक आदि अवस्था र उन्नती-प्रगतिको सम्पूर्ण प्रतिबिम्बित अवस्थाको ऐतिहासिक शभ्यता हो। शभ्यता विना राष्ट्रको परिभाषा पूर्ण हुँदैन। भूमिपति आदिवासी थारुहरुको ऐतिहासिक भु-भागलाई एवं शभ्यतालाई राष्ट्रको शभ्यता राष्ट्रको पहिचान मानेर, ऐतिहासिक थरुहटभूमिको प्रादेशिक नामाकरण थरुहट कायमगरेर, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा, जातियराज्य भन्दै, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अपमानित गर्दै, अखण्डे नामका केही भिजलान्तेहरुलाई भड्काएर थारु र गैरथारु विचमा लडाएर आफ्नो निहित नश्लवादी स्वार्थको रोटी सेक्दै हुनुहुन्छ।
भिम जी, हामी तपाईलाई सवाल गर्न चाहन्छौ, थारुहट अर्थात थारुवान कसरी जातिय राज्यभयो..? हामिले बुझेको,राष्ट्र भनेको कुनै भु-भागको ढुंगा माटो,खोला,नाला,साध-सिमा मात्रै होइन।त्यहाँ बसोवास गर्ने जनताको शभ्यता,संस्कृति र मनोभाव हो। यी सवै नै राष्ट्र हुन्। यी राष्ट्र-राष्ट्र मिलेर नै कुनै निश्चित पूर्णराष्ट्र बनेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण राष्ट्रलाई माया गर्नु नै साचो अर्थमा राष्ट्रवादी हो। उदारणको रुपमा हामिले बोल्ने भाषा तपाईहरुको खसभाषा भएपनी, हामिले लेख्ने लिपि,मान्ने धर्म संस्कृति बाहुनकै भएपनी यिनिहरु हाम्रा राष्ट्र हुन्। हाम्रा पहिचान हुन्। यिनिहरु माया गरेर मात्रै हामी साचो अर्थमा राष्ट्रवादी बन्न सक्छौ। तर तपाईं राष्ट्रवादी वताउनु हुन्छ, तपाईं कसरी राष्ट्रवादी हुनुभयो..? अर्थात तपाईं कुनखाले राष्ट्रवादी हो?
हामिले बुझेको,थारुहरुको ऐतिहासिकभूमी, तर त्यो भूगोलमा रहने सम्पूर्ण जाति समुदायको साझा सम्पती, हामिहरुवाट प्रस्तावित थरुहट प्रादेशिक राज्यलाई जातिय भन्नेहरु राष्ट्रवादी होइनन्। किनभने, थारुहरुको शभ्यता केवल थारु जातिको मात्रै शभ्यता नभै, त्यो भु-भागमा हुर्केका सवै जाति समुदायको संस्कृति र मनोभाव हो, सम्पती हो। यदी,थारुहरुको ऐतिहासिक भुभाग मात्रै थारुहरुको मात्रै हो, त्यो भुभागमा हुर्के बढेकाहरुको होइन भने, हामिले बोल्ने तपाईको खसभाषा र, लेख्ने,मान्ने धर्म संस्कृति,लिपि,र बाहुन धर्म संस्कृति भन्नू पर्यो नि..। यो कसरी नेपाली भयो? तपाईको खसभाषा सम्पूर्ण नेपालीको हुने,बाहुनको धर्म,संस्कृति र लिपि नेपाली हुने, तर नेपाल नामाकरण हुनुभन्दा पुरानो सभ्यता, ऐतिहासिक भुभाग थारु जातिय मात्रै हुने…? यो कसरी तर्क सङ्गत हुन्छ? वष्तुत: सत्य केहोभने, यदी थारु शभ्यता त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य सवै जातिय समुदायको हैनभने,हैन भन्नेहरु त्यो भुभागका सरणार्थी नै हुन्, आफूलाई शरणार्थीको मनोरोगवाट पिडित छ्न्। अर्थात तपाईं हरुले आफुले आफुलाई थारुहट भूमिको भूमिको भूमिपुत्र, त्यो भूमिको मालिक होइन भनेर आफूलाई शरणार्थीमा दर्ज गराउन चाहनुहुन्छ। त्यसो होभने तपाईहरुलाई शरणार्थी भन्दा दुख मान्नु भएन।
भिम जी, साच्चै डा.बाबुरामले बिखण्डन निम्ताउन खोजेका हुन् ..? त्यसो होभने, तपाईकै पार्टीको सरकार छ, बिखण्डनकारीलाई हाल्नुहोस् न जेलमा…। के हेरेर बस्नु भएको छ..?
अब देश समाजवादी पार्टीमय बन्दै छ, त्यो अवस्थामा तपाइकै क्षेत्रमा पनि, राजनीतिक रुपमा तपाईको हरिविजोग हुने अवस्था देखिन्छ। लाग्छ तपाईहरुको लुटको दोकान बन्द हुनसक्छ, त्यसैले तपाईंहरु त्रसित हुनुहुन्छ, सत्य यहि हो।
अत: तपाईंहरु देश र जनतासङ्ग साच्चिकै इमानदार हुनुहुन्छभने, डाक्टर भट्टराई,साम्सद रेशम चौधरी लगायत, सम्पूर्ण टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरु सम्पूर्ण बिखण्डनकारी हुन् र तपाईं र तपाईका अखण्डेमात्रै राष्ट्रवादी हुनुहुन्छभने, तपाईहरु सहि, अरु सवै गलत ठान्नुहुन्छ्भने, टिकापुर घटनाको सत्यसाचो,दुधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने गिरिषचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। छ हिम्मत..? छैन! किनभने आज सचेत नेपाली जनता जनताले जाने बुझे,तपाईहरु झुठो,बैमानी र फटाहा हो। तपाईहरुको छल्छाम र धोकेवाजीको कथित राजनीति गरिरहनुभएको छ। फेरीपनी मभन्छु लाल आयोगले त्यही भन्छ।
अब तपाइहरुको छल्छाम र धोकेवाजीवाट चलाएको नश्लवादी राज्यसत्ताको माकुरेजालो च्यातिदै छ।
भिम जी, अझैपनी केही नबिग्रेपनी,धेरै बिग्रेको छैन। त्यसैले समग्र समस्या निकासको निम्ति तपाईहरु आफ्नो गल्ती सुधारेर माननीय रेशम चौधरीलगायत सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई यथासिघ्र रिहाई गर्दै, पहिचान सहितको 10+1प्रदेश निर्माण गर्न राजी हुनुहोस्। यसो गरेमा मात्र समग्र देश र जनताको भलो हुनेछ।